दाङमा प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच कुटाकुट, ५ जनाको अवस्था गम्भीर — Imandarmedia.com
दाङमा प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच कुटाकुट, ५ जनाको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं। एक जना म्यादी प्रहरीको मोबाइल हराएको बिषयलाई लिएर दाङमा प्रहरी र म्यादीबीच झडप भएको छ। सो झडपमा कम्तीमा ५ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
तालिमको बेला शारिरीक यातना दिइएको गुनासोकाबीच म्यादी र प्रहरीबीच झडप भएको हो। दाङमा अहिले साढे ४ सय बढी म्यादी प्रहरी तालिमका लागि खटिएका छन्।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले अस्वाभाविक माग राखेको भन्दै कांग्रेस कास्कीका दुई सचिवले विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धन तोडेको घोषणा गरेका छन्। तर, सभापति किशोरदत्त बराल भने गठबन्धन कायम रहेको बताउँछन्।
उनी अहिले पनि गठबन्धनकै बैठकमा छन्। म बैठकमै छु। गठबन्धन टुटेको कुरा साँचो होइन,’ उनले भने, ‘सचिवहरूले किन त्यसो गर्नुभयो मैले बुझ्न पाएको छैन। विज्ञप्ति निकाल्न मसँग सल्लाह लिनुभएको होइन।
अहिले जिल्लाका पालिकामा बाँडफाँट टुंग्याउन गठबन्धनको बैठक होटल दीपसागरमा बसिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष धनराज आचार्यले विज्ञप्ति गलत भएको बताए।
कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा बैठक बसिरहेको बेला बाहिरबाट आएका विज्ञप्तिले खासै असर नगर्ने उनको भनाइ छ।गठबन्धनको बैठक चलिरहेको छ। सभापतिज्यू यहीँ हामीसँगै हुनुहुन्छ।उनले भने गठबन्धन टुटेको भए बैठक किन चलिरहन्थ्यो?
टुटेको छैन। यो कायम रहन्छ। एकीकृत समाजवादीले पोखराको मेयरमा दाबी गरेको छ। तर, कांग्रेसले भने जनमत नै नभएको पार्टीले मेयर माग्दा हारिने भन्दै कांग्रेसले नै मेयर पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
दुई सचिवले एकीकृत समाजवादीको माग अस्वाभाविक भएकोले उसँग गठबन्धन नहुने विज्ञप्तिसहित जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई सोहीअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै, आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका तीन दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने भनिए पनि जुम्लामा भने गठबन्धन नहुने भएको छ।
स्थानीय तहको नेतृत्वको भागबन्डा नमिलेपछि हुम्लामा सत्तारुढ दलले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष शिवराज शर्माले बताए।
वार्तामा सहभागी दलका अनुसार तीन दलबीच भएको बैठक गाउँपालिका बाँडफाँटमा कुरा मिल्न नसकेपछि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा समीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेको माओवादी केन्द्र हुम्लाका संयोजक डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए।
उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिका बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि बैठक उपलब्धिपूर्ण हुन नसकेको कांग्रेसका हुम्ला सभापति मोहनविक्रम सिंहले बताए।
एकीकृत समाजवादीले राखेको कांग्रेस र माओवादीबीच तीन–तीन गाउँपालिका र एकीकृत समाजवादीलाई एक गाउँपालिका दिनुपर्ने प्रस्तावमा कांग्रेस सहमतिमा पुगे पनि माओवादीले मानेको र,
माओवादी चार वटा गाउँपालिका आफूले पाउनु पर्ने अडान राखेका कारण बैठकले भागबण्डा मिलाउन नसकेको कांग्रेस उपसभापति वसन्त रोकायाले बताए। सातवटा स्थानीय तह रहेको हुम्लामा ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले चार पालिकाको अध्यक्ष,
एक उपप्रमुख र १८ वडाध्यक्षसहित एकसय पदमा जितेको थियो। कांग्रेसले दुई गाउँपालिका प्रमुख, एक उपप्रमुख ११ वडाध्यक्षसहित ७६ पदमा जित्दा एमालेले एक पालिकाको अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष र १० वडाध्यक्षसहित ५० पदमा चित्त बुझाएको थियो।